TILMAAMAHA UGU WANAAGSAN EE CASRIGA EE CASRIGA UGU FIICAN - KUFSI
Ka hor intaanan sii wadi doonin tixgelinta koowaad, waxaan jeclaan lahaa in aan yiraahdo erayo yar oo ku saabsan mabda'a ah ee hawlgalinta qoob-ka-shaqeeynta guriga (laga bilaabo Latitude ncnnare - waxaan lakulmiyaa chicks). Waa qalab kaas oo heerkulka joogtada ah iyo qoyaanka loo hayo si loo hirgeliyo dabiiciga ah ee cayayaanka shimbiraha beeraha laga soo bilaabo ukumaha. Waxaa jira dhowr nooc oo qalab sida:
Buug-yarahan - Tilmaamahani waa in ukumaha loo baahan yahay in loo bedelo afartii saacadoodba.
Mechanical - ukumaha ayaa loo rogay hal kabaal, laakiin waa weyn iyo sidoo kale waa in sidoo kale loo rogaa gacanta, kaliya manipulation this waxay qaadataa laba jeer oo kaliya.
Automatic - qalabka si toos ah ayuu u shaqeeyaa 12 ukumo beedka maalintii.
Waxaa jira isweydaarsiyo caalami ah oo loogu talagalay dhammaan noocyada ukunta iyo moodooyinka kuwaas oo kaliya goose, digaag, ukun ama digaagduur ayaa la soo saari karaa.
Baro nuucyada qudaarta, digaagga, shimbiraha, turkiga, turkiga, berriga oo gacan ka geysta gacan-qabsi.
Marka la eego mugga, waxaa jira qalab ku xiran tiro kaladuwan oo ukun ah. Loogu talagalay qaboojiyeyaasha taranta guryaha ku habboon ilaa 50, ilaa ugu badnaan 150 ukumood. Miisaanka warshadaha, waxay isticmaalaan mashiino ku xiran ilaa 500 oo ukun oo isku mar ah.
Kobcinta laba nooc oo cunto ah ayaa sidoo kale la soo saaraa:
Tiknoolajiyadda ugu dambeysa waa qollado kulaylin, oo leh qalab elektaroonik ah, oo karti u leh barnaamijyada iyo dhawaaqyada dhawaaqa marka ay dhacdo in dheecaan batroolka ah ama ismaamul diirran.
Ma taqaanaa? Waxaa jira caddayn in kulubka ugu fudud ee lagu abaabulay Giriigii hore, in ka badan saddex kun oo sano ka hor. Qeybaha dabiiciga ah ee la korsado ayaa sida caadiga ah ka duwan kuwa ka soo horjeeda shimbir hooyada.
Hadda, waxaan kugu martiqaadaynaa inaad wax ka baratid kulliyadaha ugu caansan ee soo saarka gudaha iyo kan Shiinaha. Mid ka mid ah kan ugu horreeya, habka ugu habboon ee loo isticmaalo qalabka ugu badan ee iibsashada cayayaanka ee chicks ee beeraha yaryar, waa "Blitz-48". Waa qalab gawaarida oo ukumaha u rogaya labadii saacadoodba mar. Hal saxaarad, oo ay ku jiraan naqshadda qalabka, waxay hayn kartaa 130 ukun bakeeriga ah, digaag - 48, nuug - 38, goose - 20. Waxaa jira hal nooc oo kale oo la dalban karo oo ah "Blitz-72", kaas oo u oggolaanaya inuu soo bandhigo 72 digaag oo digaag ah, 30 lakab oo ah berriga, 57 ducklings iyo 200 digaagduur.
Guud ahaan, qalabka "Blitz" waxaa lagu kala soocaa alaabooyinka laga sameeyo jidhka, iyo awoodda.
Xulashada miisaaniyadda ugu badan - "Blitz-Norma", oo ah jidhka kaas oo laga sameeyey polystyrene. Tusaaluhu waa mid aad u iftiimaya - miisaanka waa qiyaastii 4.5 kg. Qashinka dibadda ee heerarka kuleylka ah ee Blitz wuxuu ka samaysan yahay tufaax, derbiyada gudaha waxaa laga sameeyaa caag xumbo ah, daboolana ka samaysan caag ah daahfurnaan. Waxay ku qalabaysan yihiin diirimaad dhijitaal ah iyo tamar dabaq ah 12 V.
Faa'iidooyinka qalabka "Blitz":
hagaajinta heerkulka wanaagsan - qaladka waxaa lagu qori karaa keliya 0.1 darajo;
daboolka hufan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la socoto waxa ka dhacaya gudaha;
helitaanka tamar gashiga korontada, oo la geyn doono hawlgab haddii qalabka korontada laga saaro, oo aan si dhif ah u dhaco baadiyaha iyo banaanka magaalada;
xirmada waxaa ku jira baayacmushtarro wax lagu beddelayo kuwaas oo aan ahayn kaliya ukunta digaaga lagu dhejin karo, laakiin sidoo kale wax soo saarka shimbiraha kale ee beeraleyda ah, taasoo ka dhigaysa qalabka wax taraya;
fududeyn oo sahlan inaad isticmaasho, waxbarashadu waxay kuu ogolaaneysaa inaad fahamto geeddi-socodka, xitaa kuwa bilowga ah;
joogitaanka taageeraha ayaa tirtiraya suurtagalnimada kulaylka;
dareemayaasha la dhisay - si taxadar leh ula socdo heerkulka iyo qoyaanka;
biyaha ayaa lagu dari karaa daloolka daboolka leh daboolka oo xiran mana jirto khalkhalka microclimate ee dhexda qalabka.
Dhibaatooyinka qalabka kuleelka:
Dhibaatada marka biyaha lagu daro dalool daloolka maxaa yeelay waa mid aad u yar;
Dhibaatada ukumaha ku dhejisan baayacmushtarka - nidaamkan waxaa lagu sameeyaa saxaarada laga soo saaro masraxa, iyo gobolka ku dhajiya waa dhibaato si loo dhigo masraxa.
Waa muhiim! Ka hor intaanad bilaabin inaad ku shaqeysid kuleylaha, waxaa lagama maarmaan ah in si faahfaahsan loo barto barashada. Badanaa, waxyeello iyo waxyeelo soo gaarta ukumo ayaa sabab u ah cilladda mulkiilaha qalabka, kuwaas oo si khalad ah uula dhaqma.
Ka mid ah dib u eegista ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan kuwa isweydaarsiyeyaashu waa kuwa ugu fiican, midkastaa wuxuu ku soo bixi karaa xusuusta qalabka wax lagu qoro ee Cinderella. Mawduucyadeeda looma dhicin sababtoo ah tayada hufan iyo qiimaha macquulka ah Ukunta qalabka qalabka ayaa si toos ah u rogaa seddex saacadood kasta, laakiin sidoo kale adiga ayaa sameeya. Waxaa jira noocyo kuu oggolaanaya in aad soo bandhigto 48 ilaa 96 digaag. Waxaa sidoo kale jira saxaarad loogu talagalay ukunta goose. Saldhigyada loogu talagalay wicida kale ee aan qaliinka ahayn kuma jiraan qalabka, waxay u baahan doonaan inay si gooni ah u iibsadaan.
Qalabka qalabka waxaa laga sameeyey xumbo. Ciladda ilaalinta heerkulka waa 0.2 darajo. Ma jirto batari dibadeed, laakiin waa suurtagal in la isku xiro. Tusaale ahaan, ujeeddadaas waxaa ku haboonaa qalabeeyaha caadiga ah ee gawaarida.
fududahay oo sahlan in la isticmaalo, waxay ku xiran tahay beeraley novice si ay u fahmaan;
dayactirka wanaagsan ee heerkulka iyo qoyaanka;
qiime macquul ah.
xayawaanka oo ka soo baxa gudaha badeecada la soo saaro urta, taas oo macnaheedu yahay in ay tahay in si fiican loo nadiifiyo isticmaalka kasta;
Xaaladda waxaa ku jira micropores kuwaas oo ku urursan adagtahay in laga saaro wasakhda;
cilladaha qalabka gawaarida si ay ukun u noqdaan - mararka qaarkood waxyeello waa suurtagal;
Cabbirrada heerkulka iyo qoyaanka waxaa saameeya bay'ada dibedda waxayna ku dhici kartaa marka qoyaanka qabow ama qandho sare leh.
Waa muhiim! Biyaha kuleyliyaha kuleylaha ayaa lagama maarmaan u ah qaybinta isku dhafka ee kuleylka iyo joogteynta heer ku filan oo ah microclimate haddii ay dhacdo shucuur. Maqnaanshaha korantada, qalabku wuxuu caadi ahaan shaqeeyaa 10 saacadood. Isticmaalka qalabka aan biyo lahayn waa mamnuuc.
Caadi ahaan marka la eego halka loo tixgelinayo in khubaradu ay u fiican tahay in lagu iibsado wax soo saar badan ama guriga, mid ka mid ah boosaska ugu horreeya waxaa ku yaal "Hibiska Fiican". Waxay ku tarmi kartaa 100% chicks. Suuqa waa noocyo kala duwan oo loo isticmaalo gogol xaako - si toos ah iyo farsamo. Farriinta tooska ah waxaa la sameeyaa saddexdii saacadoodba. Waxa kale oo jira xulasho ballaaran oo ah xoojin kumbuyuutar: waxaa jira noocyo ka koobnaan kara 63 ilaa 104 digaag. Noocyada aasaasiga ah waxaa loogu talagalay kaliya digaagga taranta. Wixii ukumo shimbiro kale waxay u baahan doonaan inay si gooni ah u iibsadaan taraagyada.
Qalabka jirka - xumbo. Tani waa labadaba iyo sidoo kale ka jar. Faa'iidada jidhka oo kale waa in ay tahay mid aad u iftiimaya. Khasaarada ayaa ah in ay tahay mid aan la marsiinin urka iyo si fudud loo xiro, taas oo ay ugu wacan tahay qalabku u baahan doono in la nadiifiyo oo si joogto ah loo nadiifiyo. Kuwa kale faa'iidooyinka ka mid ah "Dhamaan Dhammaadka" waa in la muujiyo:
rakibidda walxaha kululaynta REN, oo ka tirsan jiil cusub, si fiican u hayso heerkulka, ha qallalin hawada;
fududayn, fududaynta qaabeynta iyo hawlgalka;
joogitaanka ilaalinta korontada korontada;
Waxaa jira tiro khasaare ah:
Ma jiro xidhiidhiyaha batteriga dibadda ah;
daaqad yar oo aan kuu oggolaaneyn inaad si buuxda u ilaaliso geedi socodka gudihiisa.
Qalabka guriga si looga saaro shimbiraha ilmaha "Kvochka" waxaa laga sameeyey polyfoam. Waxaa ka mid ah heer-kuleyliyaha, iftiinka iftiinka iyo kululeeyaha, heerkulbeegga (analog ama elektaroonik). Hannaanyo horumarineed oo lagu qalabeeyay taageerayaal loogu talogalay qaybinta hawada. Gaadiidka baakidhka leh ee ukunta waxay u dhacdaa si farsamo ahaan, iyada oo tilmaan u ah istaagga gudaha. Si loola socdo geedi socodka gudaha, waxaa jira laba daaqadood oo kormeer ah. Biyaha waxaa lagu shubay laba tuubo, kuwaas oo ku yaalla hoose ee qalabka.
Kobcinta ayaa kuu oggolaaneysa inaad si siman u muujiso 30 gocoon, 40 - ducklings iyo poults, 70 - digaagga, 200 - digaagduur. Faa'iidooyinka "Kvochki":
fududaynta dhismaha - qiyaastii 2.5 kg;
ma qaadan meel badan - 47 cm oo dherer ah, 47 cm width iyo 22.5 cm ee dhererka;
joogitaanka tilmaamo sahlan oo xitaa tababbarrada ay ogaan karaan;
qalab fudud oo fudud oo sahlan oo la badali karo;
waxa loola jeedaa qalabka miisaaniyadda;
cunaa tamar yar.
ma laha heer aad u sarreeya oo lagu kalsoonaan karo;
mashiinka farsamada ee ukunta ma aha mid ku haboon;
dayactir qoyaan la'aan ah.
Waa muhiim! Ukumaha digaaga ayaa lagu xirayaa ilaa 21 cisho, duck iyo turkey - 28, digaagdheer - 17.
Isku-xirka tooska ah ee "Laying" wuxuu u oggol yahay hurdada taranta shimbiraha kala duwan, xitaa qoolleeyda iyo xakamaynta. Waxaa jira laba nooc: Bi 1 iyo Bi 2, oo leh qalabka cabbirka dhijitaal ama analogometer. Qalabka ugu dambeeya waa qiimo jaban qiimaha. Noocyada ayaa kuu oggolaanaya inaad dhigto 36-100 ukumood. Qaar ka mid ah waxay ku qalabaysan yihiin dareeraha qoyaanka.
Xaaladda qalabka waxaa laga sameeyey balaastik caag ah, kaas oo yaraynaya qiimaha iyo fududeeyaa naqshadeynta, waxayna sidoo kale siineysaa guryaha guryaha kuleylka leh. Ciladda qalabka isbeddelka waa 0.1 digrii.
Kumbuyuutarku wuxuu awood u leeyahay inuu qalabka ku wareejiyo batari dibadeed, laakiin tani waxa kaliya oo lagu samayn karaa gacanta. Intaa waxaa dheer, beteriyada aan ku jirin baakada asaasiga ah. Waa in la iibsadaa marka lagu daro. Hawlgabka batterigu waa suurtogal 20 saacadood. Faa'iidooyinka ka midka ah "Layer":
fududahay in la maareeyo: waa la isku hagaajiyaa hal mar kadibna mararka qaarkood la isku hagaajiyo;
lagu qalabeeyay daaqad si loo ilaaliyo nidaamka iyo xakamaynta heerkulka;
kuu ogolaanayaa inaad ku xirto batrool kasta 12 V;
iyada oo qaadashada biyaha saxda ah, waxay ku hayaan mikroclimate ka dib markii ay iftiimiso iftiinka afar ilaa shan saacadood;
wuxuu ka kooban yahay shabakado lagu xareeyo ukumaha waaweyn iyo kuwa yaryar;
la awoodi karo;
wuxuu leeyahay miisaan hooseeya: laga bilaabo laba ilaa lix kiilo garaam;
wuxuu leeyahay hannaan kulul oo fiican.
Iskudheellitir la'aanta ukunta, taas oo aan muhiim ahayn, laakiin waxay saameyn kartaa boqolkiiba hatchability;
Dhibaatada nadiifinta ee xubnaha gudaha;
jilicsanaanta jirka ee xumbo.
Waa muhiim! Shirkadku kuma talinayso in qalabka lagu rakibo dabaqa, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad daryeesho qalabkaas. Waxaa lagugula talinayaa inaad hubiso heerkulka gudaha ka dib marka la rakibo heerkulbeeg caadi ah.
Isku-xirka "Ceceda" waa mid kale oo aan qaali ahayn oo wax soo saarka gudaha ah. Waa qalab ku jira xaalad fiyuusi ah oo leh mashiinka farsamooyinka ah oo si toos ah ugala wareegaya labadii saacadoodba (ku xiran nooca). Waxaa lagu qalabeeyaa hygrometer (oo aan ku jirin dhammaan noocyada), heerkulbeegga dhijitaalka ah, taageere, digsi qashinka ah (aan ku jirin dhammaan noocyada) iyo saddex god oo loogu talogalay 150 ukun digaag ah. Wixii ukumo shimbiraha kale, sicirada waxaa loo iibsadaa lacag.
Biyaha waxaa lagu shubayaa qubeyska laga jari karo ee lagu rakibay qalabka iyada oo aan furin daboolka, kaas oo u ogolaanaya inaysan faragelinin microclimate gudaha ah.
Baaritaanka ukumaha ka hor iyo inta lagu jiro xilliga dhalada waa tallaabooyin muhiim ah oo ku saabsan taranta taranka. Jeeg ay la socoto gargaarka baaritaanka Qalabkan waxaa laga iibsan karaa dukaanka ama si sahlan u samee naftaada.
Faa'iidooyinka kuxiga "Poseda":
Guryo adag oo loola dhaqmo biyo cadaadis ah iyo wakiilka antimicrobial;
saxsanaanta heerkulka illaa 0.2 darajo;
kalsooni si toos ah loo leexiyo;
joogitaanka baaldiga qashinka, kaas oo haya hadhaaga qolofka iyo hoosta ka dib gujiska qashinka oo ka dhigaya mid sahlan in laga saaro;
kuu ogolaanayaa inaad soo bandhigto ilaa 90% chicks;
awood u lahaanshaha inuu ku xirmo batterit dibadeed iyadoo ay joogaan qalab wax lagu beddelayo 220 V ilaa 12 V.
maaddaama kiiska dibadda laga sameeyay jilbaha, qalabku wuxuu leeyahay culeys weyn (qiyaastii 11 kg);
Qeyb ka mid ah noocyada qaar ka mid ah ma jiraan wax tallaabo ah oo loogu talagalay ukumaha shimbiraha kale ee beeraha.
In line of kulaaleeyaha ee wax soo saarka Yukreeniyaan Nest yihiin soo bandhigay moodooyinka baahida shakhsiyeed (ee 100-200 ukumaha), iyo qiyaasta warshadaha (ilaa 500-3000 ukunta). Caan ka mid ah cutubkan ayaa lagu sharraxay, ugu horreyntii, iyada oo la isku halleyn karo kulanka iyo tayada qaybaha. Intaa waxaa dheer, qalabku wuu fudud yahay inuu shaqeeyo. U qalmida ukumaha dhammaan shimbiraha beeraha, xitaa moodooyinka ukunta duurjoogta ayaa la soo saaraa. Jidhku wuxuu ka sameysan yahay bir ah, oo lagu daboolay rinjiga budada. Kululeeyaha daboolka - polyoolam. Qalabka tufaaxa - balaastiig jamac ah.
Qalabka waxaa lagu qalabeeyaa hygrometer casri ah, heerkulbeeg, fan, koronto qaboojiye koronto.
Faa'iidooyinka qaybta maskaxda ee Nest:
Naqshad casri ah (muuqaalka muuqaalka la midka ah qaboojiyaha) iyo helitaanka qaybaha sida muuqaalka mareenka caloosha;
awooda lagu hagaajiyo hawada;
Xiriirka korontada ayaa la bixiyaa;
laba darajo oo ka hortag ah oo ka hortag ah;
qeylada hoose markaad boodheysid.
cabbirro waaweyn: dherer: 48 cm, width: 44 cm, dherer: 51 cm;
miisaan weyn - 30 kg;
dhibaatooyinka leh bedelida qaybaha;
marka la akhriyayo hygrometer ka dib laba ama saddex sano oo shaqo ah, qaladku wuu kordhayaa;
marka kor loo qaado biyaha iyo uumiga xooggan, kondensatadu waxay hoos u dhacdaa albaabka iyo qalabka hoosta.
Ma taqaanaa? Digaagga gudaha ayaa ka soo baxa digaagga duurka ee ku nool Aasiya. Sida laga soo xigtay saynisyahanka, domestication ee digaagga, sida laga soo xigtay xogta qaar ka mid ah, ka dhacay 2 kun oo sano ka hor Hindiya, sida laga soo xigtay xogta kale - 3.4 kun oo sano ka hor Asia.
WQ 48 waa qaabka kaliya ee dib u eegista China. Waxay leedahay qalab gawaarida ah oo loogu talagalay ukumaha ukunta ka dib laba saacadood ka dib. Kobcinta waxaa loogu talagalay 48 ukun digaag ah, laakiin waxaa kale oo lagu qalabeyn karaa saxaarada ukunta yar. Jidhku wuxuu ka sameysan yahay balaastiig, oo leh dhuun xajin.
Faa'iidooyinka WQ 48:
isafgarad iyo iftiin;
roonaanta markaad nadiifinaysid;
Hooska hooseeya ee shimbiraha - 60-70%;
Qaybaha aan la isku halleynin, inta badan way ku guuldareystaan;
cillad la'aanta heerkulka iyo qoyaanka;
saameyn ku yeelanshada microclimate ee arrimaha arrimaha dibadda;
hawo-galin xumo, waxay u baahan tahay dib-u-kicinta hawada hawada.
Maanta, taranka lo'da ayaa ah ganacsi caddaalad ku dhisan oo yar yar iyo weynba. Kordhinta, beeraha yar yar ama mulkiilayaasha shakhsiyaadka gaarka ah ee guryaha gaarka loo leeyahay ayaa u adeegsanaya isweydaarsiyo iswada. Ka hor intaanad iibsan mid, waa inaad go'aansataa tirada qorsheysan ee hatchlings si aad u akhrido, akhriso dib u eegis, ama weydii ra'yiga saaxiibada. Markaad doorato, waa in aad fiiro gaar ah u yeelatid waxqabadka (kartida waxaa lagu cadeeyaa soo saaraha, oo ku salaysan ukunta digaaga), waddanka wax soo saarka (sida aad arki karto, shirkadaha guryaha soo geliya waxay soo bandhigaan xulal ballaadhan oo leh kala duwanaansho ballaaran oo qiimaha leh, iyo alaabtani ma jiri doonto dhibaato wakhtiga dayactirka), waajibaadka damaanad qaadka, qalabka iyo wax soo saarka (xumbo waa kulul, laakiin waxay ka nuugeysaa urta iyo jilicsanaanta; balaastikadu way ka xoog badan tahay, laakiin qabow), joogitaan / maqnaansho il awood ah.